Calaamadaha Kugu Ilaawimaayo Ex-gigaagu | Niman qurux badan
Lamaanayaal badan ayaa ku kala taga iyagoon fileynin dib u heshiisiin suurtagal ah. Waa adag tahay in laga gudbo kala tag waxaana had iyo jeer jira ciilkaas oo ciil ah ama aan la ogeyn inuu mar uun nolosha dib u heli karo. Dadku isma bartaan marka ay soo maraan daqiiqad dilaac ah iyo sida ay uga falcelinayaan.
Si aad u adkaysato waa inaad raadi daqiiqado naga mashquuliya ilaa hadhow aynu ka helno qodobkaas oo inagu sii socda. Laakiin go'aan la'aantani waxay ku kacaysaa oo ka dhigan tahay in dad badan ma ilaawaan 'lamaantoodii hore'.
Haddii aad tahay qof dhalinyaro ah, waa inaan ku celinaa dhalinyaradaas mowduuca lammaanaha ayaa wax badan iska beddelay. Marka la eego xiriirka badan ee lagu arko, rag iyo dumarba, arrinta xiriirka hadda looma qaadan wax qurux badan, shakhsi ahaaneed iyo inaad soo dhaweyso inay tahay hanti weyn. Mararka qaarkood waxaa loo qaataa sidii tuurasho, oo aan dhab ahayn wax ballan ah ma jiro. Ka dibna marka ay kala tagaan oo ay dhowr bilood tagaan, waa marka ay ogaadaan in wax runtii maqan yihiin.
1 Calaamadaha muujinaya in aanu hore kuu iloobin
2 Calaamadaha aad hore u ahaan jirtay ee uu runtii kugu iloobay
Calaamadaha muujinaya in aanu hore kuu iloobin
Waxaa jira calaamado badan oo tilmaamaya in hore uu weli raacayo la sugayaa haddii aad u fiirsato. Weli way jiri doontaa, xitaa haddii aysan u muuqan, sababtoo ah run ahaantii ma heli kartid fursad aad mar dambe wada joogtid. Waa tan iyo taas aawadeed mahadsanid shabakadaha bulshada, weli wax baad ka garan kartaa qofka aad ka tagtay.
Hubaashii soo booqo goobihii aad wada mari jirteen. Waa hab lagu xasuusto ama lagu arko si maalinle ah wax aad weli u xiisayso. Haddii aad sidoo kale ku sugan tahay meel isku mid ah, laga yaabee inaad arki karto in waqti ka waqti uu ku soo eego, sababtoo ah hubaal la yaab.
Malaha wuu ka tagayaa taas albaabada u furan isu imaatinka cusub oo waxaad arki kartaa marka aadan jebin shabakadaha bulshada. Isaga ama iyada ma rabo inuu joojiyo qoraalka uu kuu soo qorayo, ku weydii sida aad tahay oo aad u sii wadi karto adigoon ceeb lahayn. Kuwo badan ayaa ka taga khadkaas mid furan, iyaga oo ka tagaya naxariis inta u dhaxaysa maalin kasta, iyo haddii ay jirto fursad cusub in dib loo midoobo.
Wali waad haysataa xusuusta gaarka ah ee midba midka kale, iyo gaar ahaan isaga ama iyada. Marka xiriirka uu go'o, waxa ugu badan ee soo noqnoqda waa inaad iska tuurto wax kasta oo qofkaas u iman karo inuu ku xasuusiyo. Laakiin haddii walxahaas la hayo waxay noqon doontaa sababtoo ah ma rabo inuu iloobo. Waxa kale oo dhici karta in aad sheegato shay gaar ah oo ay wakhti dheer qaadanayso in aad ka soo kabsato,taasi waa calaamad kale oo aan mugdi ku jirin oo kuu sheegaysa in aanu doonayn in aad wali noloshiisa ka tagto.
Sidoo kale, shabakadaha bulshadu weli waa hubkaas, si aysan u lumin waxa ay dad badani jecel yihiin in ay soo bandhigaan noloshooda. Waxa laga yaabaa in aad ogaanayso halka uu joogo, cidda uu la joogay, waxa uu cunay...ama uu qofkaasi soo bandhigayo. Sababtoo ah hore ayaa ku soo booqday oo doonaya inuu tuso waxaad samaynayso, isagoo ujeedadiisu tahay inuu muujiyo in wax walba ay si wanaagsan u socdaan. In badan oo ka mid ah muuqaalladaas ayaa weli lagu arki karaa masayrka qaar.
Calaamadaha aad hore u ahaan jirtay ee uu runtii kugu iloobay
Waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale jeceshahay inaad ka dhigto wax kasta oo uu sameynayo, sababtoo ah malaha wuu isku dayaa illow wax kasta oo aad noolaysay wada jir. Hubaal nasashadu waxay kacday go'aanka labada dhinac ama sababtoo ah mid ka mid ah labadooda ayaa go'aansan sababtoo ah nooc ka mid ah isqabsi la'aanta.
Haddii aad hore u qaadato si sax ah masaafada oo aanu helin nooc ka mid ah cudurdaar in aan kuugu soo dhawaado, Malaha waxaan samaynayaa intii karaankayga ah si looga fogaado xaaladdaas. Xaaladaha qaarkood, iyo ragga, marar badan ma bixiyaan isu-dhowaanshaha sababtoo ah dhab ahaantii ma yaqaaniin sida loo abuuro xaaladdaas dib-u-midaynta.
Laakin haday dib u midoobidu soo baxdo waa waqtigii la wada eegi lahaa calaamadahaas muhiimka ah. Kuuma xiisi doono haddii uu salaanta fogeeyo, waa sax oo ma sarraysiiyaan, ciil kuma jiro, kimistariguna lama arko. Hubaal inaad hor taagan tahay qof ayaa awooday inuu ku iloobo. Waxaa jiri doona oo kaliya muuqaalkaas yar oo lagu sameeyay xanaaq, ka xumahay iyo niyad-jab halkaasoo aan kuu sheegi karo taas weli wax kuu tabaya.
Waxaad sidoo kale ilaalin kartaa in noloshiisa dadka uu ku faraxsan yahay ayuu ka buuxinayaa. Caadiyan waxaan galnaa god ka hor kala tag, laakiin waxaa jira dad u baahan inay saaxiibo kale kula joogaan qaab caadifad ah ama ku raaxaystaan ​​qosolka dhexmara asxaabta. Halkaa waxa uu tilmaamayaa in uu ku faraxsan yahay iyo in waxa uu hilmaamayaa waayihiisii ​​hore.
Iyo wixii ka sarreeya mar dambe ku raadin maayoIsagu dan uma hayo haddii aad cumaamado baabuurkiisa kaga tagtay ama dabaylaha guriga. Had iyo jeer wuxuu raadiyaa hab uu ku helo cudur daarkaas oo uu kula soo xiriiro, laakiin haddii aysan jirin, u qaado taas wax walba waa laga gudbayaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Calaamadaha aad hore u ahaan jirtay in aanu ku iloobin